Lumbini Online | » अवैधानिक रुपमा विदेश लैजाने विरुद्ध कडा कानुनको तयारी ! अवैधानिक रुपमा विदेश लैजाने विरुद्ध कडा कानुनको तयारी ! – Lumbini Online
अवैधानिक रुपमा विदेश लैजाने विरुद्ध कडा कानुनको तयारी !
विनियोजन विधेयक, २०७३ अन्तर्गत श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा विभिन्न दलका २७ सांसदले प्रश्न गर्नुभएको थियो । यस्तै रामहरि खतिवडा, पेम्बा लामा, कृष्णप्रसाद पौडेल, चूडामणि विक जङ्गली र निशाकुमारी साहले थप स्पष्टीकरण माग्नुभएको थियो ।